Thit Htoo Lwin: 10/30/11 - 11/6/11
19/05/13 - 26/05/13 (182)
NLD ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရေး၊ မတင်ရေးကိစ္စအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေ ဆွေးနွေးအပြီး လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ တနိုင်ငံလုံးက NLD ဗဟိုဦးစီးတွေနဲ့ ထပ်မံတွေ့ဆုံပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ NLD က စီစဉ်ထားတာပါ။
ဒါ့ကြောင့်မို့ ၁၈ ရက်မတိုင်ခင် တချို့ပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ သဘောထားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် နေတာတွေရှိနေပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း၊ မိတ္ထီလာခရိုင်ထဲက nld ပါတီဝင်တွေကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ဖို့မှာ သဘောတူကြတာများပေမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့မှာတော့ မတူတဲ့အမြင်တွေ ရှိတာမျိုး သိရတယ်လို့
မိတ္ထီလာခရိုင်က NLD ဗဟိုဦးစီးတယောာက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာသိန်းလွင်က ပြောပါတယ်။
“မှတ်ပုံတင်လိုက်ပြီးတော့ မ၀င်ဘဲနေလို့ရရင်လည်း နေစေချင်တယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ရှိသေးတာကိုး။ တကယ်လို့ မတော်တဆများ ယိုင်သွားမယ်ဆိုရင် တို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလည်း ပြန်စဉ်းစားရတယ်။ တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါ့လေ။ နှစ် ၂၀ ကျော် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဟာ အမျိုးမျိုး အလှည့်ပတ်ခံပြီးတော့ သံသယအကျိုးကတော့ ရှိနေတယ်။ အခြေခံမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ မရှိသေးဘူးလား ဆိုတော့ အခြေခံမှာ ဒီ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရွေးတာကျတော့ နဂိုရ်မူလလူတွေပဲ သို့မဟုတ် သူတို့ကြံ့ခိုင်ရေးကလူတွေ၊ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့လူတွေချည့်ပဲ။ ဒီလိုပဲ ငွေများတရားနိုင်၊ ငွေနည်းတရားရှုံးနေတာတွေလည်း ရှိနေတယ်”
ဧရာဝတီက ဦးမန်းညွန့်သိန်းပါ။ NLD ပါတီဟာ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်မကုန်ခင် ကျင်းပပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ဥပဒေအရ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ၀င်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ NLD ပါတီ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက VOA မြန်မာပိုင်းကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
11/10/2011 10:11:00 PM
ပဉ္စမမြောက် ရင်ချင်းဆက်အမြွှာ ခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်
အေးအေးငြိမ်း၊ အိအိငြိမ်း (ဓါတ်ပုံ--Facebook)
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လောင်းလုံမြို့နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် မအင်ကြင်းခိုင်နှင့် မအင်ကြင်းလှိုင်
ရင်ချင်းဆက်အမြွှာအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင် ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ခွဲစိတ်ခဲ့ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ငန်း အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ တိုးချဲ့ဆောင်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၆ နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင် ခွဲစိတ်မှု စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး နံနက် ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင်
ပါမောက္ခဒေါက်တာထူးဟန် က စတင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ရာ နံနက် ၁၀ နာ ရီ ၁၁ မိနစ်တွင် သီးခြားစီခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ ၁ နှင့် ၂ တို့မှ
ရင်ချင်းဆက်ခွဲစိတ်ပြီး နေရာများ ပြန်လည်ချုပ်ပေးမှုမှာ နံနက် ၁၁ နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မအင်ကြင်းခိုင်နှင့် မအင်ကြင်းလှိုင်တို့မှာ လက်ရှိတွင် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ပါမောက္ခဌာနမှူးများပါဝင်သည့် အထူးကြပ်မတ်ကုသရေးအဖွဲ့ က ဆက်လက်၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယခု မအင်ကြင်းခိုင်နှင့် မအင်ကြင်းလှိုင် ရင်ချင်းဆက်အမြွှာ ခွဲစိတ်ကုသမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ရင်ချင်းဆက်အမြွှာ ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ငန်း အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ရင်ချင်းဆက်အမြွှာ မနန်းစိုး၊ မနန်းစံကို ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အေးအေးငြိမ်း၊ အိအိငြိမ်းတို့အား ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မိုးပပမောင်၊ မိုးပပအောင်တို့အား တတိယအကြိမ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မစိုပြေလင်းနှင့် စိုပြေ၀င်းတို့အား စတုတ္ထအကြိမ်အဖြစ် လည်းကောင်း အထူးကုသမားတော်ကြီးများက အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသ ပေးခဲ့ကာ မြန်မာ့ဆေးလောကသမိုင်း၌ မှတ်တိုင် စိုက်ထူခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။
စိုပြေ၀င်း၊ စိုပြေလင်း ရင်ချင်းဆက် အမြွှာညီအစ်မနှစ်ယောက်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညီမအငယ်ဖြစ်သူ စိုပြေလင်းမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကျောက်ကပ်ရောင်ဝေဒနာဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
7Day News Journal ( Novenber 11 )
ဥရောပ (၁၁) နိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများ
စုစည်းထည်ထောင်ထားသည့် Forum for Burmese in Europe (FBE) မှ -
DVB (Democratic Voice of Burma) မှ လုပ်စား ဟန်ညောင်ဝေနှင့် ရာသက်ပန်
အဝေးရောက်အစိုးရဟုအမည်ရသောအဖွဲ့ (NCGUG) မှ ၀န်ကြီးချုပ်ဆိုသူလုပ်စားစိန်ဝင်း
တို့ ၏ - လုပ်စားဇာတ်ထုပ်အား နော်ဝေး၀န်ကြီးချုပ် Jens Stoltenberg ထံသို့ 
တိုင်ကြားတင်ပြလွှာအား (၁၁/၁၀/၂၀၁၁) ရက်စွဲဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းပေးပို့ 
His Excellency Mr. Jens Stoltenberg
Royal Nowegian Government, Office of the Prime Minister,
Subject: Request to replace the temporary Executive Director Harn Yawnghwe from
Democratic Voice of Burma (Oslo) DVB. Your Excellency,
are the Executive Members of the Burmese Community in Europe, and we are very pleased to know that your Government has been active on Burma. We truly appreciate your relentless devotion to democracy in Burma.
are writing this letter to inform you that the corruption in DVB shocked us tremendously. As Burmese living abroad, we feel very shameful for the incident where donation money of the kindhearted Norwegians taxpayers were basically stolen. This
kind of criminal act is not tolerable and the persons who are responsible for this dishonest act need to be punished according to the Norwegian laws.
main persons responsible are executive director and deputy director for
their sloppy management. Also the temporary Executive Director Harn is
not trusted by the
Burmese communities in Europe, Latin America, Africa, and in Asia. Harn has been using donors’ money for building his
own empire, not for the democratic change in Burma but to split the country for his personal revenge. His family suffered under Ne
led military regime and so did all of us, but his personal vengeance became reality when he was appointed as the Chief of Euro-Burma office by U Sein Win’s so called
exile government known as National Coalition Government of the Union of Burma
he betrayed NCGUB and founded the ethnic organization called Ethnic Nationalities Council (ENC), which had him expelled from the NCGUB. Later he changed his stance from anti-government toapro regime and ended up angering the ethnic leaders, which resulted in his departure from ENC.
He is now supporting the Muslim group called Rohingyas by attended the Muslim conference in London. His action created an outright rejection of his political career by Arakanese people.
Below is our opinion and suggestion you should consider for the future success of DVB.
1. Forum of Burmese in Europe, as well as the audience of the DVB, do not accept
Harn asaDirector of DVB.
2. Harn Yawnghwe is not clean from corruption and he has been using the democratic revolution as his personal benefit and not for the people.
3. Majority of the democratic forces living abroad did not support Harn and his activities.
4. We want to see someone from the board of directors who is trustworthy withapassion about Burma to substitute Harn’s position. This person does not need to beaBurman.
5. We need an explanation from the board of directors and the executive directors why senior reporter Htet Aung Kyaw and other reporters who were laid outafew
6. The mismanagement of the DVB by the two executive directors led to the shameful corruption. Those two are responsible for the corruption and needastrong reaction.
7. We want the board of directors to investigate the properties of the management team and calculate whether their salaries can afford such expensive houses.
8. DVB is created for pro-democratic movement and it needs to be always pro democratic in view and support pro-democratic activities, and not as
a neutral broadcasting station, on the other hand, the Burmese regime’s
broadcasting station is only one-sided bias on government activities.
9. The management team misused their power by censoring pro-democratic leaders
they disliked them. Because of this behavior many contributions to the democratic movement has been wasted. This kind of unprofessionalism needs to stop.
10. DVB needs brave journalists inside Burma who dare to take risks and who dare
give their names as DVB reporters. It will terminate the middle persons who try to snatch the middle portion of the funding. FBE is willing to help with this missing link.
11. If you require evidences about the accusations made towards Mr Harn, we are ready to give you atalater date.
therefore ask you and your Government to suspend Mr. Harn Yawnghwe from
the temporary executive director of the Democratic Voice of Burma,Norway as soon as possible.
We thank you for your kind attention of our appeal and petition, and we offer you and the people of Norway our best wishes.
Executive members of Forum for Burmese in Europe (FBE)
1. U Than Htike(PL)(htikemaungthan@gmail.com)
2. U Kyaw Thwin(NO)(kyawthwin2004@yahoo.com)
3. Sonny Aung Than Oo(DE)(atoburma@web.de)
4. Ko Htin Kyaw(F)(htinkyaw9954@hotmail.com)
5. Ma Moe Moe Khin(DK)(khinnannar@yahoo.com)
6. Ko Tin Ko Win(NL)(Kowin.tin08@gmail.com)
7. U Khin Maung Kyi (Former Diplomat)(UK)(kmkyi@hotmail.co.uk)
Cc: DVB Board of Directors
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ဘုရားဖူးများ နေ့စဉ်ဦးရေ ၃၀၀၀ နီးပါး အခမဲ့တည်းခိုနိုင်ရန် စီစဉ်ထား
ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်သို့ ယခုနှစ်၏ ဘုရားဖူးအလာများသည့်ကာလအတွင်း ဘုရားဖူးဧည့်သည် စုစုပေါင်းဦးရေ ၁၀ သိန်းကျော် လာရောက်ဖူးမျှော်လည်ပတ်ရန် ရည်မှန်းထားပြီး နေ့စဉ်ဘုရားဖူးဧည့်သည် ၃၀၀၀ နီးပါးအတွက် အခမဲ့တည်းခိုရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အဆိုပါဂေါပကရုံး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ဇန်န၀ါရီလများတွင် နှစ်စဉ်ဘုရားဖူးဧည့်သည် အများအပြား လာရောက်လေ့ရှိသော်လည်း ယခုနှစ်၏ နိုဝင်ဘာလ အတွင်းတွင် လာရောက်သူမှာ လျော့နည်း ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂေါပကရုံးမှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုး ဦးတင်ညွှန့်က ''အခုချိန်အထိတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ဘုရားဖူးဧည့်သည် နည်းပါးနေတယ်။ အဓိကတော့ ရာသီဥတုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့အထိ မိုးတွေ ရွာနေတုန်းပဲ၊ နှင်းတွေလည်း အရမ်းကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇင်ဘာလနဲ့ ဇန်န၀ါရီလနှစ်လအတွင်းကိုတော့ ဘုရားဖူးလာရောက်တဲ့ ဧည့်သည်ဦးရေ ၁၀ သိန်းကျော်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထား ပါတယ်'' ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
''အခုဘုရားဖူးကာ လအတွင်းမှာ နေ့စဉ်ဦးရေ ၃၀၀၀ နီးပါး အခမဲ့တည်းခိုနိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ထားတယ်။ တည်းခိုမယ့် ဘုရားဖူးဧည့်သည်တွေက ဘုရားရင် ပြင်တော်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဆီမီး ၉၀၀၀ ဓမ္မာရုံ၊ ပြည့်စုံ တည်းခိုခန်းတွေမှာ အကြောင်းကြားပြီးတော့ အခမဲ့ တည်းခိုနိုင်ပါတယ်။ တည်းခိုမဲ့သူတွေက ဘာအထောက်အထားမှ ပြစရာမလိုပါဘူး'' ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
11/10/2011 06:18:00 PM
၁၃၇၂ ခု တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲ အမှတ်တရ ရုပ်သံ
11/10/2011 06:12:00 PM
တရားမ၀င် ကားတင်သွင်းမှုများကို အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိနေချိန် အေးရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ရဲထွဋ်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီး ကျန်အရာရှိတချို့လည်း ထွက်ပြေးရန် ပြင်ဆင်နေကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လိုင်စင်မဲ့တပတ်ရစ် ဂျပန်ကားများကို စက်မှုဇုန်ထုတ်ကားအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်း ရပ်ထားစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ပုဂ္ဂလိက ဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သည့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း၊ မြန်မာ့စက်မှု ဆိပ်ကမ်းများတွင် လိုင်စင်မဲ့ကားများ တရားမ၀င် ဖမ်းဆီးချိန်မှစ၍ ဦးအောင်ရဲထွဋ်မှာ ရုံးမတက်တော့ကြောင်း၊ ၎င်းနှင့်ရင်းနှီးသော အကောက်ခွန် ညွှန်ကြားရေးမှူးများက ဦးအောင်ရဲထွဋ် ကိုယ်စား ခွင့်တိုင်ခဲ့ကြကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုထားသည့် ခွင့်ရက် ကျော်လွန်သည်အထိ ဦးအောင်ရဲထွဋ်မှာ ရုံးပြန်မတက်တော့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လစာမဲ့ခွင့်အဖြစ် ဆက်လက် တင်ပြထားသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာအကောက်ခွန်ရုံးချုပ်သို့ ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုကြောင်း အကောက်ခွန်ရုံးနှင့် နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
“ဆိပ်ကမ်းမှာ ကားတွေစပြီးဖမ်းတဲ့ ဒီနှစ်လယ် လောက်ကတည်းက ဦးအောင်ရဲထွဋ် ရုံးမတက်တော့တာ၊ အခုဆိုရင် ၄ လကျော် ၅ လလောက် ရှိနေပြီ။ ကားတွေ တရားဝင် သွင်းတဲ့အမှုနဲ့ သူက တိုက်ရိုက် ပတ်သက်နေတော့ မရှင်းနိုင်လို့ ထွက်ပြေးသွားတာ။ တချို့အရာရှိတွေလည်း ပြေးဖို့ ပြင်နေကြပြီ” ဟု နေပြည်တော် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
လိုင်စင်မဲ့ကားများ တရားမ၀င် တင်သွင်းမှုတွင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးစီးမှူး၊ ဒု ဦးစီးမှူးအပါအ၀င် အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်း ၆၀ ကျော် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြုလုပ် ထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနညွှန်ချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်မှူးကြီးစံသောင်း (ယခုမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး) လက်ထက်မှာ အကျင့်ပျက် ခြစားတာတွေ အုပ်စုဖွဲ့ကျူးလွန်တာမျိုး အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုညွှန်ချုပ် ဦးထွန်းသိန်း လက်ထက်မှာလည်း ဆက်ဖြစ်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းက သူ့လူတွေကို အထိမခံဘူး။ ကာကွယ်ပေးထားတယ်” ဟု နေပြည်တော် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနရုံး အရာရှိက ဆိုသည်။
ဦးထွန်းသိန်းသည် ယခင်က နေပြည်တော်ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ရုံးအဖွဲ့မှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး ၀န်ကြီးဦးလှထွန်း၏ လူယုံလည်းဖြစ်ကာ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ပြောင်းရွှေ့တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက ကား ၇ စီး တရားမ၀င် သယ်ဆောင်လာသည်ဟု ဆိုကာ ACE အမည်ရှိ ၀န်ဆောင်မှု အေဂျင်စီ တခုကို လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရာသက်ပန် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့်အပြင် အဆိုပါအေဂျင်စီတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ၏ လုပ်ကိုင်ခွင့် ကတ်များကိုပါ ၇ ရက်တွင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ ပြန်အပ်စေခဲ့သည်။
ထိုကိစ္စကို မကျေနပ်သော အေးဂျင့်များက လာဘ်ယူခဲ့သော အကောက်ခွန်အရာရှိများ
အကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ တိုင်စာများပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
“လက်ခုပ်ဆိုတာ တဘက်တည်း တီးလို့ မမြည်ပါဘူး။ အေးဂျင့်တွေမှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ မပြောဘူး၊ အေးဂျင့်တွေရော၊ ကားခိုးသွင်းတဲ့သူရော၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေပါ ပေါင်းလုပ်ကြတာ။ ဒါပေမယ့် အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေက အပြစ်မရှိသလိုလိုနဲ့ တခြားလူတွေကို အပြစ်ပုံချတာ၊ ထိုးချတာကတော့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး” ဟု ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး အေးဂျင့်တဦးက ပြောသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်က အကောက်ခွန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်လေးနှင့် ၀န်ထမ်း ၆၀၀ ကျော်ကို အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့် အရေးယူ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် ယင်းနှစ်တွင်ပင် အကောက်ခွန်ဦးစီးမှူး ၁၀၀ ကျော်
ခန့်ထားရန် အလုပ်ခေါ်ယူခဲ့ရာ လူ ၈၀၀၀ ကျော် အလုပ်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် နီးစပ်သူများမှာ အထူးဦးစားပေးအဖြစ် အလုပ် ခန့်အပ် ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
နာမည်ကြီးကျောင်း တက်ပေမယ့်လည်း အလုပ်မရနိုင်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် အလုပ်လက်မဲ့ များပြားလာခြင်းနှင့်အတူ နာမည်ကြီးကျောင်းများတွင် ပညာသင်ယူမှု ကျဆင်းလာကြောင်း တွေ့ရသည်။
နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်များမှ ဘွဲ့ရရှိသော်လည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းနှင့် ကြွေးထူခြင်း တို့ကြောင့် ကျောင်းသား အချို့သည် တချိန်က Ivy League ဟုနာမည်ကျော်ခဲ့သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာဆည်းပူးခြင်းထက် ဈေးနှုန်းချိုသာသော ကျောင်းများကို ရွေးချယ်မှု ပိုမိုများပြားလာသည်။ နာမည်ကြီးကျောင်းတက်ပေမယ့်လည်း အလုပ်မရနိုင်
နာမည်ကြီးကျောင်း တခုဖြစ်သော ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်တွင်
ဘွဲ့ကြို ကျောင်းသားတဦး၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ တနှစ်လျင် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ငါးသောင်းအထိ ကုန်ကျနိုင်သည်။ ကျောင်းပြီးပါက အလုက်အကိုင် ရရှိမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဘွဲ့ရ အများစုသည် ချေးငွေ ပြန်ဆပ်နိုင်မှု အရေအတွက် တနှစ်ထက်တနှစ် မြင့်မားလာကြောင်း အချို့သော စစ်တမ်းများတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ ကျောင်းသားများသည် ငွေကြေး အကုန်အကျ များသော နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်များကို
ရှောင်ကာ ငွေကြေး သက်သာသည့် ပြည်သူပိုင် ကျောင်းများနှင့် ကွန်မြူနတီ ကောလိပ်ကဲ့သို့သော ကျောင်းများတွင် တက်ရောက် သင်ကြားမှု များပြားလာခဲ့သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် Mr Schwartz သည် ကော်နဲလ် တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသော်လည်း ကျူရှင် စရိတ်သက်သာသည့် နယူးယောက် တက္ကသိုလ်မှ Macaulay Honors College တွင် ပညာသင်ကြားနေသည်။ “ ဒီအချိန်က
တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ငါးသောင်းလောက် သုံးရမယ့် အခြေအနေ မဟုတ်ဘူး၊ အကြွေး မတင်ဘဲနဲ့ ပြည်သူပိုင် ကျောင်းတွေကလည်း ဒီဂရီ တခု ရနိုင်တာဘဲ” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ မိသားစုဝင်ငွေ
တနှစ်လျင် ဒေါ်လာ တစ်သိန်း အထက်ရှိသော ကျောင်းသားများသည် အိမ်ခန်းငှားခ သက်သာစေရန် မိဘနေအိမ်များမှ ပညာ သင်ကြားနိုင်သော ပြည်သူပိုင်ကျောင်းနှင့် ဒေသကောလိပ်ကို ရွေးချယ်မှု ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်တွင် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ကျောင်းသူ Natasha Pearson သည်
ဘော်စတွန် ကောလိပ်တွင် ပညာ သင်ကြားခွင့် ရရှိခဲ့သော်လည်း ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး အပါအ၀င် မိသားစုမှ တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ သုံေးသာင်း သုံးစွဲရမည် ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းစရိတ် သက်သာသည့် နယူးယောက်မှ Hunter College တွင် ပညာသင်ကြားနေသည်။ ချမ်းသာသော
မိသားစုများမှလည်း ပညာရေး အသုံးရိတ်ကို ၁၈ ခိုင်နှုန်းထိ လျှော့ချလာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျောင်းသားများ နာမည်ကျော် ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားခြင်း နည်းပါးလာရခြင်းမှာ ဘွဲ့ရ လူငယ်များ ကြုံတွေ့နေရသည့် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုနှင့် ချေးငွေများ ပြန်မဆပ်နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည် သုတေသန
စစ်တမ်းများတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ ကျောင်းလခ သက်သာသည့် တက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်များတွင်ပညာ သင်ကြားသော ကျောင်းသားများ၏ အခက်အခဲမှာ ကျောင်းသား များပြားခြင်းကြောင့် ကျောင်းသား ဆရာ အချိုးညီမျှမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် လေးနှစ်အတွင်း လေ့လာရမည့် ဘာသာရပ်များ ပြီးဆုံးရန် ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဘွဲ့ကြိုကျေင်းသား Mr Schwartz သည် စရိတ် သက်သာသည့် ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြား နေသော်လည်း အမှတ်ကောင်းဖြင့် အောင်မြင်ပါက နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ဖြင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး အတွက် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ “ ကျနော်တို့
ကြီးပြင်းလာတဲ့ ခေတ်က ကျနော့်မိဘတွေ ခေတ်တုန်းကနှင့် မတူတော့ဘူး၊ ကျနော်ဘာလိုချင်လဲ၊ ကျနော် ဘာကို ရနိုင်သလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတယ်၊ ကျနော်က ဆရာဝန် ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် အခြေအနေမပေးဘူးလေ၊ လူတွေပြောသလို ငွေက အရေးမကြီးဘူးဆိုပေမယ့် အခုအနေမှာတော့ ငွေကအရေး အပါဆုံးဘဲ” ဟု သူ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောဆိုခဲ့သည်။ လှရွှေ
Sources; Weigh in: Is an Ivy League Degree Worth It?
11/10/2011 05:40:00 PM
မြန်မာပြည် ၏ ထိပ်သီးခရိုနီ ဦးတေဇ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (အပိုင်း-3 ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
DK၊ ၊၄င်း၏ကုမ္ပဏီများအား အနောက်မဟာမိတ် နိုင်ငံများမှ ပိတ်ဆို့ခဲ့သောကြောင့် ကနဦးပိုင်းတွင်
ဦးတေဇမှ အတော်ပင် ပေါက်ကွဲ ခဲ့၏။ ဦးတေဇမှ မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ကမ္ဘာ တွင် စီးပွားရေး
နိုင်ငံများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အနေအထား တွင် ရှိနေသူ များအတွက် လှုပ်ရှား နိုင်သော ဂွင်မှာ ကျဉ်းမြောင်းသထက် ကျဉ်းမြောင်းလာလေ၏။
ပိတ်ဆို့မှု တွေကြောင့် ကျနော် တို့ပိုတောင်မှ ချမ်းသာလာသေးတယ် ” ဟု ဦးတေဇမှ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ပုဂ္ဂလိက လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်ပြီး ATR42-320, ATR72-500
နှင့် FOKKER-100 လေယာဉ်များ အပါအဝင် လေယာဉ် (၁၂) စင်းပါဝင်သည်။ ပြန်လည်ရောင်း ချမည်ဆိုပါက အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၂၅) သန်းမှ သန်း (၃၀) အကြားတွင်
ရရှိ နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
အော်ရီယမ်နန်းတော် (Aureum Palace) နှင့် မြန်မာ့ရတနာ (Myanmar
Treasure) နာမည်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပါဝင်သည်။ အခန်းပေါင်း (၁၁၀၀) ခန့် ပါဝင်သော ဟိုတယ်ပေါင်း (၁၇) ခုပါဝင်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၁၂၀) မှ (၁၅၀) အတွင်းခန့် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
11/10/2011 11:03:00 AM
မိဘနှင့်အတူမနေရသော ၁၇နှစ်အောက်ကလေးများ မွန်ပြည်နယ်တွင်အများဆုံးရှိနေ
မိဘနှင့် အတူတကွမနေရဘဲ ရှင်သန်ကြီးပြင်းရသည့် အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်အများ စုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နီးစပ်သော မွန် ပြည်နယ်ဖြစ်သည်ဟု စီမံကိန်းရေး ဆွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သွေးသွေးချစ်က ပြောသည်။ ”လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေ အရ တွေ့ရှိရတဲ့ အချက်ပါ”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခုကို လေ့လာဆန်းစစ်ရာ ဖြစ်ရပ်အများဆုံးမှာ မွန်ပြည်နယ်ဖြစ်ကာ ယင်းနောက်မှ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့ ဖြစ် ကြောင်း၊ ဖြစ်ရပ်အနည်းဆုံးမှာ ကယားပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည် နယ်တို့ဖြစ်ကြပြီး အဘယ်ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းကို အသေးစိတ်မမေးမြန်းခဲ့ရဘဲ လတ်တလော အခြေအနေအရ အတူတကွ နေထိုင် ရမှုရှိ၊ မရှိကိုသာ မေးမြန်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ယင်းဖြစ်ရပ်များဖြစ်နေခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေရခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်ဟု မွန်ပြည် နယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကမာမိုရွာမှ ဦးအောင်ကပြောသည်။ ဆက်လက်၍ ဦးအောင်က ”ဒီမှာထက် ပိုရကြလို့ဟိုဘက်ကို သွားလုပ်ကြရတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေကို ထားခဲ့ကြရတာပေါ့” ဟုပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၌ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရသောကြောင့် မိဘများအနေ ဖြင့် မိမိကလေးများကို ဘိုးဘွားများနှင့် ဆွေမျိုးများထံသို့ အပ်နှံထားကြရသည်ဟု မွန်ဒေသခံအချို့ထံမှ သိရ သည်။ မိဘနှင့် ကင်းကွာနေမှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ကလေးသူငယ်အချို့ ပျက်စီးသည့် လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှုများ ရှိသည်ဟု မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဒေါက်တာ အောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။ ”ကလေးဆိုတာက မိဘနဲ့ကင်းကွာရင် အထူးသဖြင့် မေတ္တာငတ်ရတာတော့ အမှန်ပဲ။နောက်ပြီး တစ်ခုရှိတာက အတူနေတွေက အလိုပိုလိုက်ရတယ်။ ဒီတော့ ဆိုးဖို့ဆို တာက သိပ်ပြီးလွယ်ကူတယ်” ဟု ဒေါက်တာ အောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။ ကလေးများမှာ မိဘရှိ၍ နိုင်ငံခြားသို့ ခေတ္တအလည်သွားပြီး စိတ်ကြွဆေး သုံးခြင်းများကြောင့် ဦးနှောက်ပျက်ကာ ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်နေသူများနှင့် HIV/AIDS ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှု အချို့မှာလည်း ရှိနေကြသည်ဟု ဒေသခံ အချို့က ဆိုသည်။ ”စာရိတ္တပိုင်းရော၊ ဆေးစွဲတာ ရော ဒီဘက်က ကလေးတွေ အဖြစ် များနေတယ်။ ဒီတော့ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းကြရမယ့် နည်းလမ်းတွေ လိုနေတာတော့ အမှန်ပဲဆို တာ ပြနေတယ်”ဟု ဒေါက်တာအောင် နိုင်ဦးကထပ်မံပြော ဆိုသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု အရ မိဘတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံး သေဆုံးပြီး ရှင်သန်ခဲ့ရသည့် အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များမှာ မြို့ပြက ပိုများနေသည်ဟု ဆို သည်။ မိဘစုံမရှိခြင်းနှင့် မိဘ လုံးဝမရှိကြခြင်းသည် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နှစ်ဆကျော်တက်လာပြီး အသက် ၁ဝ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကြားမှာ အများဆုံးဖြစ်နေ သည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုလသမဂ္ဂကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် စစ်တမ်းအရသိရသည်။ ယင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် မှာ ဒေသအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဖန်တီး ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။
”ဒေသအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့အလုပ်နဲ့ လောက်ငမှုမရှိကြတဲ့အတွက် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာမှာ သွားလုပ်နေကြရတာပါ။ ဒီမှာ အဆင်ပြေနေရင် ဘယ်သူကသွားလုပ်ကြမှာလဲ။
သေသူသေ၊ ကျေသူကျေခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလည်း များနေကြပါပြီ။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေ၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွေ များများဝင်လာကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်မှု တွေ ပြုရပါမယ်။ ဒါမှ ဒီပြဿနာတွေ မရှိတော့မှာ”ဟု ဒေါက်တာ အောင်နိုင်ဦးက သုံးသပ်သည်။ မွန်ပြည်နယ်သာမက ဒုတိယများသည့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် တတိယများသည့် ကရင်ပြည်နယ်တို့ကိုပါ အလေးထားကြည့်ရှုသင့်ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နီးစပ်မှု ရှိသည့် ကချင်ပြည်နယ်မှ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်မှုနည်းရခြင်းအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်သင့်သည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသော ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်စုအလိုက် ဘက်စုံအညွှန်းကိန်းများ ပြုစုခြင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲ၌ တက် ရောက်လာသူတစ်ဦးကပြောသည်။ ကလေးငယ်ကိုထားကာ
တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေရသူ အသက် ၃ဝ ကျော် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ”ကိုယ်က ကလေးကိုငဲ့နေရင် ဘယ်ကြီးပွား ချမ်းသာပါ့မလဲ။ တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုတော့ ပေးဆပ်ရတာ ဓမ္မတာပဲလေ။ ကလေးလိုတဲ့ ပိုက်ဆံကို ပို့ပေးတယ်။ ဒါက သူ့ဘဝရှေ့ရေးကောင်းဖို့ပါပဲ။ ကလေးဆိုးသွားတာ၊ မဆိုးတာက ကလေးရဲ့ကံရှိသလို၊ ကိုယ့်အကျိုးပေးနဲ့လည်း ဆိုင်တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း၌ စက်မှုဇုန်တချို့ရှိသော်လည်း အလုပ်ရရှိမှုနှင့် ရရှိသောလစာမှာ လောက်ငမှုမရှိသည့်အတွက် ထိုင်းသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရရှိလာသည့် ငွေကြေးများကို ဒေသတွင်းရှိ ရော်ဘာခြံအများစုတွင် ပြန်လည်မြှုပ်နှံမှု ရှိကြသည်ဟု ဒေသခံအချို့ထံမှ သိရသည်။ မင်းသုအောင်
11/10/2011 10:49:00 AM
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် နတ်ကျောက်အနီး landfall Area အတွင်း ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်
ကျောက်ဖြူမြို့မှ နှစ်မိုင်ခန့်အကွာ ကျောက်တလုံးဘုရား အောက်ဖက်ပင်လယ်ကမ်းခြေ နတ်ကျောက်အနီးတွင် ပိုက်လိုင်းများ စတင်သွယ်တန်းရန်အတွက် အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများကို အောက်တိုဘာလ ဒုတိယ အပတ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်အမှတ် (A-1)
နှင့်(A-3) တို့မှ သွယ်တန်းလာမည့် ပိုက်လိုင်းလမ်းကြောင်းနှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းပိုက်လိုင်းလမ်းကြောင်းတို့ ဆက်သွယ်မည့်နေရာဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်း ရေလမ်းကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ (DDIL Co.,ltd) မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စတင်သွယ်တန်းရန် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ရေအောက်ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမည့် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်ရန် အထောက်အကူပြု Infrastructures
များကို စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ တပ်ဆင်မည့်ပိုက်လိုင်းများ စတင်ရောက် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အမှတ်(၁)ဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် ကျောက်တလုံးဘုရားအနီး Pipe Yard နေရာသို့ ပိုက်လုံးတင် Transporter များဖြင့် ပို့ဆောင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် MGC Construction Co.,Ltd ၊ ကိုရီးယားအခြေစိုက် Kunchong E & C Co.,Ltd ၊ V Pile Co.,Ltd၊ Soo-Pin Carane Service Co.,Ltd နှင့် Punj Lloyd PTE Co.,Ltd ကုမ္ပဏီများမှာ ကမ်းလွန်ရေနက်ပိုင်းနှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်း ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်မှုများကို မိမိတို့တာဝန်ယူထားသည့်လုပ်ငန်းအလိုက် ဆောင်ရွက်သွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ရေနက်ပိုင်း ကမ်းလွန်ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမည့် အကွာအဝေးမှာ အဆိုပါ landfall Area မှ ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်အမှတ် (A-1) နှင့် (A-3) အထိ (၁၈၀)ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီး ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရာတွင် ရေနက်ပိုင်း ကြားခံ Digging & Installation Tower တစ်ခုစီကို ၁၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင် ထားရှိကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းနီးစပ်သူတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။အဆိုပါ landfall Area မှ မလကျွန်းကျေးရွာအနီး ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်ရုံ (OGT) အထိ ဆက်သွယ်မည့် ကုန်းတွင်းပိုင်း ပိုက်လိုင်းမှာ ၄.၈ ကီလိုမီတာ ရှိပြီး ယခုအခါစက်ယန္တရားကြီးဖြင့် အကြိုအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ရာ မကြာမှီ ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Source ; www.news-eleven.com
11/10/2011 10:42:00 AM
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်စု လွတ်မြောက်မှုတစ်နှစ်ပြည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဖိတ်စာ
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁နာရီခန့် တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရှိရသည်။
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ မီဒီယာတိုက်တစ်ခုလျှင် သတင်းထောက်တစ်ဦး နှင့် ကင်မရာကိုင်သူတစ်ဦး စုစုပေါင်း နှစ်ဦးတက်ရောက်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
တက်ရောက်လိုသော သတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့နောက်ထား၍ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဗဟိုသတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနမှ တာာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်ထံသို့ လာရောက် စာရင်းပေးသွင်း ရမည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် မိမိတိုက်မှ အသိအမှတ်ပြုပေးထားသော ကဒ်ကိုပြကာ အဖွဲ့ချုပ်မှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်ခွင့် ကဒ်ပြားကိုထုတ်ယူရန် လိုအပ်ကြောင်း ကြေငြာထားကြောင်း သိရသည်။
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်မှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် တစ်နှစ်ပြည့်ပြီမြောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ဖို့ မလေးရှား ကုမ္ပဏီ စီစဉ်
မလေးရှားနိုင်ငံ အခြေစိုက် Asia Motor ကားကုမ္ပဏီဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၄ သန်း ကုန်ကျမယ့် ကားစက်ရုံ တစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ဆောက်ဖို့ ပြင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဓာတ်ဆီဆိုင်တခုတွင် ကားများ ဆီဖြည့်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP) မလေးရှား မော်တော်ယာဉ် ပစ္စည်း အရောင်းပြခန်း တစ်ခုလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ဖွင့်ဖို့ ရှိပြီး ကားပစ္စည်းတွေကို ဈေးနှုန်း သက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းချမယ်လို့ ပြည်တွင်းထုတ် ပေါ်ပြူလာ သတင်းဂျာနယ်ကို ကိုးကားပြီး တရုတ် အစိုးရ ဆင်ဝှါသတင်းက ရေးပါတယ်။
Asia Motor ကားကုမ္ပဏီဟာ နှစ်စဉ် မော်တော်ကား စီးရေ ၃ သိန်း ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံကို တင်ပို့ ရောင်းချနေတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုပါ။
တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေဟာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပြေးဆွဲနေတဲ့ အငှါးတက္ကဆီ ၂၀၀ ခန့်ကို မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် ပရိုတွန်ကားတွေနဲ့ အစားထိုးသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မလေးရှား အခြေစိုက် ပရိုတွန် မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီဟာ ကားအမျိုးအစား ၁၂ မျိုးခန့် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံကျော်ကို တင်ပို့ ရောင်းချနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မလေးရှား ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မဟာသီယာ မိုဟာမက် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့အခါ ရာဘာ ထုတ်လုပ်ရေး၊ စာအုန်းဆီ ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေမှာ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ စာချုပ်တွေ မလေးရှားနဲ့ မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အကြား ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ စာရင်းအင်းတွေ အရ ၂၀၁၀-၁၁ ကုန်သွယ်ရေးနှစ် အတွင်း မလေးရှား မြန်မာကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ နီးပါး ရှိခဲ့ပါတယ်။
11/10/2011 10:09:00 AM
တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ရှမ်းပြည်နယ် NLD ပါတီ အနေနဲ့ ဆင်နွဲခွင့်ရရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကို မနေ့က နိုဝင်ဘာလ
၉ ရက်နေ့က ခမ်းခမ်းနားနား စတင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာမှာ ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ အနေနဲ့ ၂၃ နှစ် အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ပြန်လည် ပါဝင်ဆင်နွဲခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်၏ ကျော်ကြားလှသည့် မီးပုံးပျံလွှတ်ပွဲကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ပွဲတော်ညတွင် မြင်ရပုံ ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီ ပဒေသာပင် လှည့်လည်ပွဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ် NLD အဖွဲ့က ကျပ်ငွေ တန်ဖိုး ၃ သိန်းကျော် တန်ဘိုးရှိတဲ့ ပဒေသာပင် တစ်ပင် ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကစပြီး ရှမ်းပြည်နယ် NLD အဖွဲ့ ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့ဘဲ ဒီနှစ်မှာ ပဒေသာပင် သီးခွင့်ရော လှည့်လည်ခွင့်ပါ ပြန်လည် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း
ရှမ်းပြည်နယ် အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက ပြောပါတယ်။
ဒီပဒေသာပင်လှည့်လည်ပွဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အတူ ဗေဒါ စာသင်ကျောင်းဖွင့်ပွဲ အတွက် တောင်ကြီးမြို့ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်း၊ ရန်ကုန် BG သွေးအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူငယ်ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ရသ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်
လူငယ်ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ရသ ကြားဖြတ်ရွှေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်အားအတိအကျမသိရှိသေးသော်လည်း
နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် မိမိပါတီမှ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများထံမှ သိရှိရသည်။
ကျန်လက်နေသော လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာများတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၀ ဦး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
မြို့နယ်မှာ ၀င်နိုင်ချေရှိသလား။ အရင်တုန်းက Record တွေကရောကောင်းခဲ့သလားဆိုတာလေ့လာရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ မြို့နယ်တွေ တိုင်းတွေကနေတဆင့် ဌာနချုပ်ကိုတင်တာတွေကိုမှ ဌာနကနေဆုံးဖြတ်ပြီ်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်” အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတ်ီမှ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဆွေ ကပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီအနေဖြင့် လွတ်လက်နေသော လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနေရာဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းမှာ ငွေကြေးအခက်အခဲများကြောင့်၊ ပါတီဝင်များ၏ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသော ဆန္ဒ ကြောင့်၊ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေ ၁၀ ပါတီမှ ပေါင်းဖွဲ့ပြီးတူညီသည့် နေရာများတွင်
၀ိုင်းကူညီမည်သဘောထား အယူအဆကိုအခြေခံပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆိုသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီဥက္ကဌ ဦးသိန်းညွန့်ကပြောသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်။ တကယ်တမ်းက ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီ ရက် (၉၀)လောက်တော့ စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလုပ်မယ်ဆိုပြီး တစ်လလောက်ပဲအချိန်ပေးတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင်လို့ပါ” ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၌ ဦးဝင်ရွှေ (၄င်းသည် တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဖြစ်ပြီး ဥပဒေဆောင်းပါးများအား ကောင်းစံဝင်းနံမည်ဖြင့် ရေးသားနေသူဖြစ်သည်) မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၌ ဦးဖုန်းမြင့် (၄င်းသည် ဖဆပလ တရားရေးဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေးဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည်)၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၌ လူငယ်ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ရသ တို့အားရွေးချယ် ထားကြောင်း ဥက္ကဌ ဦးသိန်းညွန့်ကပြောသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၉၊ ရန်ကုန်မြို့။
11/10/2011 05:53:00 AM
ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာဒေသမှ ဒေသခံများ ရဲ့  ခံစားချက်
ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာဒေသမှ ဒေသခံတောင်သူများအနေဖြင့် ရရှိသော လျော်ကြေးထက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခွင့်အားပိုမိုလိုလားကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကျောက်ဖြူ-ကူမင်းဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွင်ပါသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းတွင် လျော်ကြေးပထမအဆင့် ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်၍ အချို့နေရာများတွင် ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းမှု လုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ နစ်နာကြေးရရှိသူများထဲမှ တစ်ဦးအပါအ၀င် ဖြစ်သည့် မနန်းက
“ပထမအဆင့်လျော်ကြေး (၃၅)သိန်းတော့ ရပြီးပါပြီ၊နောက်ထပ်ထပ်ရဦးမယ်ပြောတယ်၊ လျော်ကြေးထက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ လယ်ပဲစိုက်ချင်တယ်”ဟု ကျောက်မဲခရိုင် နားအိုက်ခန်း ကျေးရွာ အုပ်စုမှ မနန်းက ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့မှ သွယ်တန်းမည့် ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ကို အဓိကဖြတ်သန်း၍ တရုတ်ပြည် ကူမင်း မြို့တော်အထိ သွယ်တန်းမည်ဖြစ်သည်။
ကီလိုမီတာ -၂၈၀၀ ၀န်းကျင် ရှည်လျားမည့် ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းမှုစီမံကိန်းတွင် ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းနှင့်အတူ ရေနံပိုက်လိုင်း၊ မီးရထားလမ်းများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ များထံမှ သိရှိရသည်။
နေရာချပြီးတော့ စတင်သွယ်တန်းနေပါပြီ၊ လျော်ကြေး တစ်ဝက်ကိုလည်း ရထားပြီးပြီ၊ အခု လယ်ရိတ်နေတယ်၊ နစ်နာကြေးထက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခွင့်ကိုပဲ တောင်သူတွေ အနေနဲ့ ပိုလိုချင်ကြတယ်”ဟု နောင်ပိန်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဂေါ်ရခါးလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဒန်ဘီဒိုင်းက ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကြွက်နဖား တောင်ခြေမှ စတင်သွယ်တန်းကာ ရှမ်းရိုးမတောင်တန်းပေါ်သို့ သွယ်တန်းလာသည့် ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းတွင် ပိုက်လိုင်းနေရာချထားမှုနှင့် ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမှုလုပ်ငန်းများအား စတင် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း CNPCကုမဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။ှ
သတ်မှတ်နေရာတွေမှာ စုပုံထားပြီးတော့ ကရိန်းတွေနဲ့ စတင်သွယ်တန်းနေပါပြီ၊ အခု နောင်ပိန်မြို့နယ်ထဲမှာ သွယ်တန်းနေတာပါ၊ စခန်းသာနဲ့နားအိုက်ပန်ကျေးရွာကြားမှာ ဋ္ဌာနေစခန်း တစ်ခု သတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်”ဟု
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြိးမားဆုံးကုမဏီတစ်ခုဖြစ်သော China National Petroleum Corporation မှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံလောင်စာစွမ်းအင်ရရှိရေးဖြစ်သည့်အတွက် နစ်နာကြေးများ ပေး ဆောင်၍ အလျင်အမြန်ပြီးစီးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မာဒေးကျွန်း၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ရျမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ပိုက်လိုင်းချခြင်းနှင့် သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် ကျေးရွာများပြောင်းရွေ့ခံရမှု၊ ဥယာဉ်မြေနှင့် လယ်မြေ များအား အဓမသိမ်းယူမှု၊ လုပ်အားခများခေါင်းပုံဖြတ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသောကြောင့် လူ့အခွင့် အရေးချိုေးဖာက်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ တိုင်ကြားထားသော်လည်း ထိရောက်စွာ အရေး ယူခြင်းမရှိသဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လွတ်တော်ဗဟိုအစိုးရအဖွဲထံသို့ တိုင်ကြားမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်ထားကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါတီမှ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရှိ
နိုဝင်ဘာ ၉၊ ရန်ကုန်မြို့။
11/10/2011 05:39:00 AM
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာ အိမ် ခြံမြေဈေးတွေ ထိုးတက်
ရန်ကုန်မှာလည်း စီးပွားရေး လက်ဦးမှု ရယူလိုသူတွေကြောင့် အိမ်ဈေးတွေတက်
မြန်မာနိုင်ငံက အဓိက မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့ တွေမှာ အိမ်ဈေး၊ မြေဈေးတွေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမက တက်လာနေ တယ်လို့ စုံစမ်း သိရပါတယ်။မန္တလေး မြို့ခံ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေအကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းရှင်တဦး ပြောပြတာကတော့ ကားဈေးကွက် ငြိမ်သွား တာကြောင့်၊ မြေဈေးကွက် ဘက်ကို လှည့်ကစား ကြတာ ဖြစ် တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင် မြို့ပြင် ဘက် က မြေကွက်တွေဟာ နှစ်ဆလောက် တက်သွားကြောင်း အဲဒီ လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးက ရှင်းပြပါတယ်။မန္တလေး မြို့လယ် ဘက် မှာတော့ အရောင်းအဝယ် နည်းတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှာ လနဲ့ချီနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ရေဘေးကြောင့် အဲဒီက စက်ရုံတွေ မန္တလေးကို ရွှေ့နိုင်တဲ့အတွက် စက်မှုဇုံ မြေကွက်တွေကို စိတ်ဝင်စားမှု တွေ ရှိလာ နေတာ ဖြစ်တယ် လို့ လည်း သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်း အရင်းအနှီး နဲ့ အပြောင်းအလဲ အတွက် လက်ဦးမှု ယူသူတွေ ရှိလာ နေတယ်လို့ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်း တခုမှ ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောပါတယ်။စီးပွားရေး အကွက်မြင်သူတွေကြောင့် ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးက အိမ်ဈေး၊ မြေဈေးတွေဟာ ခေါ်ဈေးတွေ မြင့်တာရော၊ လက်သိပ်ထိုး အရောင်းအဝယ်တွေအပြင် အငှားအရမ်းတွေပါ ရှိနေတာ ကတော့ အသေအချာ ဖြစ်ပါတယ်။
11/10/2011 02:26:00 AM
ဘဏ္ဍရေး အကြံပေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
အစိုးရရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေးတွေမှာ ဘဏ္ဍရေး ကဏ္ဍလည်း ပါ
မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဘဏ္ဍရေးနဲ့ အခွန် ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာ အကြံပြုနိုင်ဖို့ အတွက် Think Tank အကြံပေး အဖွဲ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက် ပါတယ်။ဘဏ္ဍရေးနဲ့ အခွန် ဝန်ကြီးဌာနက ဖွဲ့စည်း လိုက်တဲ့ အဲဒီ အဖွဲ့ဟာ လိုအပ်တဲ့ အခါတွေမှာ ဘဏ္ဍရေး ဝန်ကြီးဌာနကို အကြံဉာဏ်တွေ ပေးဖို့ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ရပ်တည်မှုတွေကို မူတည်ပြီး အဖွဲ့ရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ဆောင်မှု ရှိမရှိဆိုတာ သိရှိနိုင်မယ် လို့ ယူဆကြောင်း အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက် အဖြစ် ထည့်သွင်း ခံရတဲ့ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် အငြိမ်းစား ပါမောက္ခ ဦးမော်သန်းက ပြောပါတယ်။အကြံပေး အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ကတော့ ယခင် မြန်မာ နိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးသန်းလွင် ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။အဲဒီ အဖွဲ့ထဲမှာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် ဥက္ကဌတွေ၊ အစိုးရ ဌာန တွေက ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေ နဲ့ ပြင်ပက ပညာရှင် တချို့ ပါဝင် ပါတယ်။အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးချိန်ကစပြီး အခုချိန် အထိ အဖွဲ့ဝင်တွေ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးတာမျိုး မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ သေးဘူးလို့လည်း ဦးမော်သန်းက ပြောပါတယ်။ဆွေးနွေး မှုတွေ ပြုလုပ်ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် သူ့ အနေနဲ့ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံ စီးပွားရေး ဘဏ္ဍရေးတို့ အတွက် အရေး ကြီးတဲ့ နိုင်ငံ တကာ ကုန်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံတွေ၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တသမတ်တည်း ဖြစ်ရေး ကိစ္စရပ် တွေကို တင်ပြ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း အငြိမ်းစား ပါမောက္ခချုပ် ဦးမော်သန်းက ပြောပါတယ်။
11/10/2011 02:21:00 AM
ဧရာဝတီမြစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အတွက် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ စတင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း ပညာရှင်များပြောကြား
ဧရာဝတီမြစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အတွက် လေ့လာဆန်း စစ်မှုများ စတင်ပြုလုပ်သင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူတို့၏ သုံးသပ်မှုများအရ သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မြစ်ဆုံဒေသမှ စတင်စီးဆင်းလာသော ဧရာဝတီမြစ်သည် နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ၀န်းကျင်ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး သဘာ၀၀န်းကျင် ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ယခုနှစ်များအတွင်း မြစ်ကြောင်း ပြောင်းလဲမှုများ သိသာလာသောမြစ်လည်း ဖြစ်သည်။
“ဧရာဝတီမြစ်ကို ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်survey လုပ်သင့်တဲ့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ စပြီး လုပ်သင့်နေပါပြီ”ဟု Water, Re-search and Training Centre (WRTC) မှ Founder and President ဒေါ်ခင်နီနီသိန်းက ပြောပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်သည် မြစ်ဖျားပိုင်းဒေသ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု အားနည်းလာမှု၊ ရေအရင်းအမြစ် နည်းပါးလာမှု၊ မြစ်တွင်အနည်အနှစ်ပို့ချမှု များပြားလာမှု စသည်တို့ကြောင့် မြစ်တွင်သောင်ထွန်းမှု များပြားလာခဲ့ ကာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ လက်ရှိကာလသည် အသိသာဆုံးသောနှစ်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဧရာဝတီမြစ်အစပြုသော မြစ်ဆုံဒေသတွင် တည်ဆောက်မည့် အကြီးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ဖြစ်သော မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ကာ လက်ရှိတွင်မူ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ရပ်နားထားပြီးဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
“မြစ်ဆုံက ရပ်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ မတည်ဆောက်မီ ကာလတွေကတည်းက မြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခဲ့တာရယ်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲခဲ့တာတွေကိုတော့ ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ လိုအပ် နေပါတယ်။ မြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းမှုက အခုအချိန်မှာပိုပြီး လိုအပ်လာပါတယ်” ဟု မြန်မာငှက် နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးညွန့်က ပြောကြားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝရင်း မြစ်များတယ်လို့ ပြောတယ်။ ရေလုံလောက်ပြီလား ဆိုတော့လည်း မလုံလောက်သေးဘူး။ ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးတွေမှာတော့ ရေလုံလောက်တယ် ဆိုရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့ ရေရဖို့ကို မိုင်များစွာ လျှောက်နေရပါတယ်”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံရှိ UNEP, AIT Regional Resource Center for Asia Pacific မှ ဦးတင်အောင်မိုးက ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခုနှစ်များအတွင်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် မိုးနည်းပါး၍ မြစ်များတွင် ရေနည်းပါးခြင်း၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် မြစ်များတိမ်ကောမှုတို့ကို ရင်ဆိုင်လာရသည်။
11/09/2011 08:21:00 PM
ငှက်မျိုးစုံ ဖမ်းဆီးရောင်းချ ဒိုင်ကြီးများအား အရေးယူပေးရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ စာတင်ထား
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးကွဲများ မျိုးတုံးလာမည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေ၍ ထိုအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ငှက်မျိုးစုံဖမ်းဆီးရောင်းချ သောဒိုင်ကြီးများအား အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနသို့ စာတင်ထားကြောင်း မြန်မာငှက်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးညွန့်က ပြောသည်။”အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ စွဲနဲ့ စာတင်ထားတာပါ။ လက်ကား ဒိုင်ကြီးတွေကတစ်ဆင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကို ဖြန့်ချိရောင်းချနေတယ်။ သူတို့ဖမ်းတဲ့ငှက်တွေထဲမှာ တစ်ခါတလေ ရှားပါးငှက်တွေတောင်ပါ တယ်”ဟု ၄င်းကပြောသည်။လက်ကားဒိုင်ကြီးများမှ ဖမ်းဆီးရောင်းချသော ငှက်များတွင် ဆောင်းခိုငှက်နှင့် ဌာနေငှက်များပါဝင်ပြီး အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဖမ်းဆီးပေးပို့ရာတွင် ငှက်များအားလှောင် အိမ်အဆင့်ဆင့် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ လမ်းခရီးရှည်လျားခြင်းနှင့် အစာရေ စာငတ်ပြတ်ခြင်းဒဏ်ကြောင့် ပြန်လွှတ်ပေးသော်လည်း သေဆုံးမှုမှာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း၊ ထို သို့ ငှက်များပျက်စီးဆုံးရှုံးနေခြင်းကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် သက်သေအထောက်အထား များနှင့်တကွ တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့သော စာအရသိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လမ်းမတော်မြို့နယ် ကမ်းနားလမ်း တရုတ်ဘုံကျောင်းရှေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ငှက်မျိုးစုံဖြန့်ချိသည့် လက်ကားဒိုင်ကြီးနှစ်ခုမှာ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဖမ်းဆီးပေးပို့သော ငှက်မျိုးစုံကို နံနက်ပိုင်း၌ လက်လီ ငှက်ရောင်းသမားများအား တစ်ဆင့်ရောင်းချ ပေးနေကြောင်း တိုင်ကြားချက်အရ ထပ်မံသိရသည်။မေမြန်မာ
11/09/2011 08:19:00 PM
မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့်ကို ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိ မေရီလန်းတွင် ကပြဖျော်ဖြေရန် အစီအစဉ်ရှိ
ကိုသူရ(ခေါ်) ဇာဂနာသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်ပို့စ်ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေပါက ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ မေရီလန်း၌ မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများနှင့်အတူ အငြိမ့် သွားရောက်ကပြ ဖျော်ဖြေရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်း အဆိုပါ အငြိမ့်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများထံမှ သိရှိရသည်။
“အခုလောလောဆယ်တော့ ဘယ်နေ့ဘာဆိုတာတော့ သေချာမသိသေးဘူး ကိုဇာဂနာလုပ်တာဆိုတော့လေ သူပတ်ပို့စ်ရရင်တော့ မေရီလန်းမှာ ကဖြစ်မှာပါ ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ရင်လည်း မြပုဏ္ဍမာ အမည်နဲ့ပါဘဲ”ဟု မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကင်းကောင်က ပြောသည်။
မေရီလန်းတွင် ကပြဖျော်ဖြေမည့် မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့်ကို ရံပုံငွေအတွက်ရှာခြင်း မဟုတ် သောကြောင့် လာရောက်ကြည့်ရှု့သူ မြန်မာပရိတ်သတ်အပါအ၀င်များကိုလည်း ၀င်ကြေးအခမဲ့ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သွားရောက်ဖျော်ဖြေရခြင်းသည် ပြည်သူအတွက် အများကောင်းကျိုးအတွက် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် သွားရောက်ဖျောဖြေခွင့်ရခြင်းကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရကြောင်း မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရသည်။
အခုလို ပြည်ပမှာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ဒါကလည်း ပြည်သူအတွက် အများအတွက် တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တာဆိုတော့ ကောင်းတဲ့အလုပ်မို့လို့ လုပ်တာပါ”ဟု မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုအရိုင်းက ပြောသည်။
ဒုတိယအကြိမ်ကပြမည့် မြပုဏ္ဍမာအမည်ဖြင့် အငြိမ့်အဖွဲ့ကို ကိုဇာဂနာမှ ဦးဆောင်ပြီး အဆိုပါအငြိမ့််အတွက် ပျက်လုံးများကိုလည်း ကိုဇာဂနာမှ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
ဇာဂနာဦးဆောင်သော မြပုဏ္ဍမာအငြိမ့်သည် ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့အသံ၌ ပထမဆုံး စတင်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ၂၅ နှစ်ကြာမှ ဒုတိယအကြိမ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် ကပြဖျော်ဖြေမည့် အငြိမ့်ပွဲဖြစ်သည်။
အငြိမ့်ကို တတိယအကြိမ်တွင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အောင်ဆန်းကွင်း သို့မဟုတ် သုဝဏ္ဍမိုးလုံ လေလုံတွင် ဇန်န၀ါရီလ ၄ရက်နေ့တွင် ကပြဖျော်ဖြေရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကိုလည်း မြပုဏ္ဍမာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကင်းကောင်ထံမှ သိရှိရသည်။
၀င့်သင်ဇာကျော် (မြစ်မခ) နိုဝင်ဘာ ၉၊ ရန်ကုန်မြို့။ သစ်ထူးလွင်
11/09/2011 07:50:00 PM
လမ်းပြင်ပေးဖို့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ ဆန္ဒပြ
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေပြေးဆွဲနေတဲ့ အဓိကလမ်းမကြီးလေးခုဟာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့အတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးထံ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှု တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အမှတ် ၂၉၂၊ ခွာညိုလမ်း၊ ၁၈/က ရပ်ကွက် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း မြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးကြွယ်က တောင်းဆိုချက် ၅ ချက်နဲ့အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုဖို့ အာဏာပိုင်တွေထံ တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးစိုးကြွယ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကို တောင်ဒဂုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက လက်ခံလိုက်ပြီး ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးမယ့် အကြောင်း ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက် ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလအထိ နောက်ဆုံးထား စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပြီး မဆောင်ရွက်ပေးပါက ထပ်မံ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လမ်းတွေဟာ လမ်းအကျယ်အဝန်းနဲ့ ကားစီးရေ မမျှတတဲ့အပြင် ရှောင်တိမ်းဖို့ မလွယ်ကူတာကြောင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်း အချို့အနေနဲ့ လမ်းကြောင်းပြောင်း ပြေးဆွဲနေရတာလဲ ဖြစိပါတယ်။
အခုလို လမ်းတွေ ပျက်စီးနေတာတွေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေထံ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
11/09/2011 07:36:00 PM
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး မီးဖွားရာမှာ ကူညီပေးတဲ့ ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
မြန်မာ Grocon ကုမ္မဏီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး မီးဖွားရာမှာ အလုပ်သမားခံစားခွင့် ရရှိရေးအတွက် ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ကိုဖိုးဖြူကို တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထား တယ်လို့သိရပါတယ်။
သူဟာ တရားရုံးက ချိန်းဆိုတဲ့ရုံးချိန်းကို မလာရောက်ခဲ့တာကြောင့် အခုလို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်း ကိုခံခဲ့ရတာပါ။
ဒီအမှုမှာ Grocon ကုမ္မဏီက ကိုဖိုးဖြူကို ပြန်လည်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကုမ္မဏီရဲ့ မန်နေဂျာကိုယ်တိုင်ဒီအမှုကို ကျေအေးလွှာတင်ခဲ့ပေမယ့် တရားရုံးက ပယ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီအမှုအတွက် ရုံးချိန်းခေါ်ဆိုရာမှာလည်း တရားရုံးရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့မညီဘူးလို့ ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကိုဖိုးဖြူဟာ ဖမ်းဝရမ်းမထုတ်မှီ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ကလည်း အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနရှေ့ လယ်သမားအရေး ဆန္ဒပြမှုမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေက တရားစွဲဆိုထားပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရုံးချိန်းခေါ်ဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
11/09/2011 07:30:00 PM
ဦးမောင်ကို ကွယ်လွန်ခြင်း (၂၁) နှစ်ပြည့် ကြေကွဲလွမ်းဆွတ် အမှတ်တရ အလှူဒါ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်စု နှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်
ဦးမောင်ကို ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကျွေးပွဲ
ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ အင်းယားကန်ဖျား ကျောင်းတိုက်တွင် ဦးမောင်ကို ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကျွေးပွဲကို ပြုလုပ်ရာ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ဦးမောင်ကိုမှာ အာဏာပိုင်ဆီးခံရပြီး ၁၇ ရက်အကြာတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ရေကြည်အိုင် စစ်ကြောရေးတွင် နှိပ်စက်ခံရမှုကြောင့် သေဆုံးသွားသည်ဟု ကျန်ရစ်သူမိသားစုများက ပြောသည်။
11/09/2011 07:24:00 PM
လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် သီးလေးသီး စုံညီစွာကပြမည်
သီးလေးသီးအဖွဲ့သားများ ပါဝင်သော ဆေးရောင်စုံအငြိမ့်ကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် မြပုဏ္ဏမာနှင့် သီးလေးသီးဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲ ကပြသွားရန်ရှိကြောင်း လူရွှင်တော်ဂေါ်ဇီလာကပြောသည်။ ”သီးလေးသီးအဖွဲ့ စုံစုံညီညီ နဲ့ ကပြတာကို ပရိသတ်အားရ ကျေနပ်မှုရှိဖို့ အခုစီစဉ်နေပါတယ်။ ပြည်တော်ပြန်လာတုန်းက မျှော် စင်ကျွန်းမှာလုပ်ခဲ့တာကို သီးလေး သီးစလုံးမစုံလို့ ကြည့်ရတာတစ်မျိုး လိုနေသလိုပဲဆိုပြီး ပြောသံကြား တယ်”ဟု ၄င်းကပြောသည်။ သီးလေးသီးအဖွဲ့များ ပြည်တော် ပြန်လာသည့် အထိမ်းအ မှတ်အဖြစ် လူရွှင်တော် စိန်သီး၊ ဇီးသီး၊ ဂေါ်ဇီလာတို့က အရိုင်း၊ ကင်းကောင်၊ ကျော်ထူးတို့နှင့်အတူ တကွ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်း တွင် ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်က အငြိမ့်ကပြခဲ့ရာ ပရိသတ် တစ်သောင်းကျော် လာရောက်အား ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပထမဆုံး အကြိမ်ပြုလုပ်မည့် လွတ် လပ်ခြင်း အနုပညာပွဲတော် နောက်ဆုံးညတွင် သီးလေးသီး အဖွဲ့သားများဖြင့် ဆေး ရောင်စုံအငြိမ့် ကပြမည် ဖြစ်သော် လည်း နေရာအတိအကျ မသတ်မှတ် ရသေး ကြောင်း သိရသည်။မေမြန်မာ
11/09/2011 07:17:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တစ်နှစ်တာ ပုံရိပ်အချို့
၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့။ ပြည်သူတို့၏ တစ်ထစ်ချ ယုံကြည်မှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် လွတ်လာမည်။ ညနေ ၄ နာရီ ကျော်ကျော် ခန့်တွင် တက္က သိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ သံဆူကြိုး အကာအရံများ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီ ဆိုသောသတင်းက မျှော်လင့် ချက်တို့ကို ရင်ခုန်လှုပ်ရှားသွား စေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အထိ ရွှေဂုံတိုင် တွင်ရှိနေသောလူစုက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရောက်လာမည်ကို ယုံကြည် ၍ ဆက်လက် စောင့်ကြိုနေခဲ့သည်။ သံဆူးကြိုးများ ဖယ်လိုက်ခြင်း နှင့်အတူ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းရှိ ခြံဝင်းအတွင်းမှ သွက်လက်လှုပ်ရှား သောခြေလှမ်းများဖြင့်ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကျန်းမာပါစေ … ကျန်းမာပါစေ။ ယင်းသို့ ဟစ်ကြွေးသံများနှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံဝတံခါး ထက်ရောက်ရှိလာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မေတ္တာ၊ ပြည်သူ၏ မေတ္တာတွေ ပေါင်းကူးကာ မျှော်လင့်ချက်တို့ ဖြေဆည်ခဲ့ ကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တကယ် လွတ်လာပြီ။ သို့သော် မချင့်မရဲ စိတ်ရှိသူတို့က တကယ်မှ ဟုတ်ရဲ့ လား။ အိပ်မက်လေလား။ တချို့က ပြန်သော်လည်း အများစုက မပြန် လို ကြသေး။ သူတို့ ရင်ခုန်နေသည်။ ပျော်ရွှင်နေသည်။ ဝမ်းသာ မျက် ရည်ဖြင့် ခံစားချက်တွေ ဖလှယ် ကြသည်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် နေ့ ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက သူမ ယနေ့ ၁၂ နာရီ တွင် ရွှေဂုံတိုင်၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့မည်ဟု ပြောကြားလိုက်သဖြင့် နံနက် ၇ နာရီခန့်ကတည်းက တဖွဲဖွဲ ရောက်လာသည်။ သူမ မိန့်ခွန်း စပြောချိန်တွင် သောင်းနှင့်ချီသော လူအုပ်ကြီးက ရွှေဂုံတိုင် လမ်းမကြီး ပေါ်၌ ကြက်ပျံမကျ စည်ကား ၍ နေသည်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သားကြီး ကင်မ်အဲရစ်(ခ)ကိုထိန်လင်း မိခင်ထံရောက်လာသည်။ နှစ်ပတ်ကြာ မိခင်နှင့် နေထိုင် သွားသည်ဟု သိရသည်မှအပ အခြားသတင်း အစအနမှ မရ။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်၊ ဧပြီ၊ မေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လှုပ်ရှားမှု တို့ကို ပြည်သူတွေ ဆက်တိုက် နားစွင့်လို့ နေသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ မွေးနေ့။ သူမ၏ သားကြီး ကင်မ်အဲရစ် (ခ) ကိုထိန်လင်း ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ရှိလာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ သား နှင့်အတူ ချစ်သောသူများ သမိုင်းဝင် ပုဂံသို့ ဘုရားဖူးသွားကြသည်။ ထိုလ အတွင်း ဘာသာရေး အလေးထား သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သီတဂူ ဆရာတော်နှင့်ပါ တွေ့ဆုံ၍ ဖူးမြော်ကန်တော့ အဆုံးအမ နာယူခဲ့သည်။ ထိုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် အားလုံးက မမေ့နိုင်သော အာဇာ နည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ။ ယင်း အကြောင်းအရာနှင့်အတူ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၏ ပုံရိပ်တို့ ပြည်သူနှင့် အနီးကပ်ပြန်လည် ထိတွေ့မိပြန်သည်။ ၉ နှစ်တာကာလအတွင်း အာဇာနည် ကုန်းသို့တက်၍ ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်များအား ဂါရဝပြု လွမ်းသူ့ ပန်းခွေ ချသည်။ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့။နေအိမ် အကျယ်ချုပ် လွတ်မြောက်ပြီးနောက် အစိုးရသစ်၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် နှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည် တွေ့ဆုံခဲ့မှုသည် ထင်မှတ် မထား သော ပထဆုံး ဆုံချက်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ဒုတိယအကြိမ် ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် ပြန်လည် တွေ့ဆုံ သည်။ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့သို့ ခရီးသွား၊ စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပွဲတက်၊ ရေဘေး ဒုက္ခသည် စခန်းသို့သွား၊ ထို့နောက် ဘုရားဖူး သည်။ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ အား လုံး မျှော်လင့်မထား မှင်တက် သွားစေသောအကြောင်းအရာတစ်ခု ပေါ်လာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်နှင့် အစိုးရသစ်၏ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ နေပြည်တော် တွင် တွေ့ဆုံသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုထဲမှာ အမိုးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာ ယင်းသို့ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူရနိုင်သော မြင်ကွင်းမျိုး။ မယုံတစ်ဝက်ယုံ တစ်ဝက်။ အိပ်တစ်ဝက် နိုးတစ်ဝက် အိပ်မက်လေလား။ နေပြည်တော်၌ ရှိနေစဉ် ပထမဆုံးအကြိမ် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပါ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ တာကွင်တားနားနှင့်တွေ့ဆုံမှုအပါအ ဝင် ယခုလအတွင်း သံတမန်အချို့ နှင့်တွေ့ဆုံမှု များသည် ပိုမိုပွင့်လင်း လာပြန်သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုတို့၏ အရိပ် အယောင်တစ်စတစ်စ ပိုမိုထင်သာ လာသည်။ အချို့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများကို မြန်ဆန်၍ စိုးရိမ်ရ သည်ဆိုသည်။ အချို့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုပြုသည်များ နှေးကွေး သည်ဆိုပြန်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူလူထုက ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည်အား မီဒီယာမှတစ်ဆင့် သူမ ၏ ခံယူချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု ထင် သာမြင်သာရှိလာခြင်းကို ပို၍ပို၍ မျှော်လင့်လာကြပြီး အနောက်အုပ်စု အပါ အဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝိုင်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် များသထက် များလာသည်။ စက် တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက် အထိ ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ လာရောက်သော အမေရိကန်အထူး ကိုယ်စားလှယ် ဒဲရစ်မစ်ချယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ ပြီး ယခုလအတွင်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေ သော ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ရပ်တန့်ပေး ရန် ပြည်သူနှင့်တစ်သားတည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထူးထူးခြားခြား ဧရာဝတီနှင့်ပတ်သက်သော ပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ၈ ပွဲပြုလုပ်ရာ ဖိတ် ကြားသမျှပွဲတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အင်တာ ဗျူးများဝေဝေ ဆာဆာဖော်ပြ လာသည်။ ထိုကာလတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများနှင့် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပေါ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မှတ်ချက်က ”တိုင်းပြည်အတွက်အသုံးချတယ် ဆိုရင်လည်း အသုံးချပေါ့၊ ရပါတယ်” ဟု အရိုးသားဆုံး ခံယူချက်။ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက် နံနက်ပိုင်း ကတည်းက ကြားရသော ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ရပ်နားသတင်းနှင့် အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့၏ တတိယ အကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှု။ ယင်းနေ့ သည် မင်္ဂလာရှိသော ပြည်သူတို့ စိတ်နှလုံးအေးချမ်းခဲ့သော နေ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံခဲ့ ပြီ။ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတို့၏ ထုတ် ပြန်ချက်များ ထင်သာမြင်သာမရှိ သည့်တိုင် ယခုကာလ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၏ လှုပ်ရှားမှုတို့က လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရေး။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး ချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဗီဂျေး နမ်ဘီးယားတို့အပြင် မလေးရှားဝန် ကြီးချုပ် ဟောင်း တွန်ဒေါက်တာ မဟာသီယာမိုဟာမက်။ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အတွင်း လာရောက် သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရစ်မစ် ချယ်နှင့် အမေရိကန် ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့် အရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ကယ်အိုစနာတို့နှင့်ပါ တွေ့ဆုံခဲ့ သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် နေ့ထိုနေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် လွတ်မြောက် ခြင်း တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်မည် ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်တာ ကာလ အတွင်း လွတ်မြောက်ပြီးချိန်၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားပင်စင် လစာ များ တိုးမြှင့်ရရှိမှု ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့၌ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်းထောင် ၄ဝ ကျော်နှင့် အလုပ်စခန်း ၁ဝဝ ကျော်မှ အကျဉ်း သား ၁၄၆ဝဝ လွှတ်ပေးမှု၊ သေဒဏ် ကျ အကျဉ်းသား ၃၄၈ ဦးအား ထောင်ဒဏ်တစ်သက် လျှော့ပေါ့မှု နှင့် အကျဉ်းသားအားလုံးကို အပြစ်ဒဏ် တစ်နှစ်လျှော့ချပေးမှု၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားမှု၊ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျ ခံနေရသူ ၃ဝဝ ခန့်အပါအဝင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ အကျဉ်း သားများ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ အ ကြောင်း ကြောင်းကြောင့် တိုင်းတစ်ပါးရောက် နေသူများအား ပြန်ဝင် ခွင့်ပေးခဲ့သလို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က ကြိုးနီစနစ်ကိုင်ဆွဲသူနှင့် အဂတိ လိုက်စားသူများအား အရေးယူရန် မိန့်ခွန်း၊ အစိုးရသစ်လက်ထက် ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန်များ လျှော့ချပေးမှု၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ များနှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလဲလှယ် ပုံ ပြောင်းလဲမှု၊ အသေးအဖွဲဟု ထင်ရသော နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ ICRC အဖွဲ့ ၂ဝဝ၅ နောက်ပိုင်း ယခု နှစ် ဇူလိုင်လတွင် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိမှု၊ အရာအားလုံးသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ၏ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် သန့်ရှင်းသော အစိုးရမိန့်ခွန်းမှစ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြိုးပမ်းမှု တို့က မဏ္ဍိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လွတ်မြောက် ပြီး တစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့် ပြီးရက် ပထမဆုံးနေ့ရက်။ ဆက်လက် မျှော်လင့်နေကြသည်ဟု ယုံကြည်သည်။မိုးမြင့်မြတ်
11/09/2011 07:15:00 PM